कहिलेसम्म आइरहन्छ यसरी भुकम्प ? तर्साको तर्साइ – हाम्रो ईकोनोमी
वैशाख १२ को भुइँचालोले चार वर्ष पूरा गर्न अब दुई महिना मात्र बाँकी छ। तर यस्तो लाग्छ, भुइँचालोले हामीलाई बिर्सेको छैन।
पछिल्लो एक महिनामै काठमाडौं केन्द्रविन्दु भएर दुईचोटि साना झट्का आए। कम्पन भलै हल्का होस्, हाम्रो मन हल्लाउन पर्याप्त थिए।
गत शनिबार साँझ ८ बजेर ३४ मिनेटमा चार म्याग्निच्युडको भुइँचालोले काठमाडौंबासीलाई तरंगित बनायो। केन्द्रविन्दु कीर्तिपुर आसपास रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ।
यसअघि माघ ८ गते थापाथलीलाई केन्द्र बनाएर ३.३ म्याग्निच्युडको भुइँचालो गएको थियो।
मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारी यी दुवै धक्कालाई गोरखा भुइँचालोकै निरन्तरता बताउँछन्।
चार वर्षसम्म गोरखा भुइँचालोको खट्खट् आइरहनुले के संकेत गर्छ? के यो स्वाभाविक हो? के गोरखा भुइँचालोको तरंग सकिएको छैन? नसकिएको भए कति दिन रहन्छ?
यो बुझ्न, यी सानातिना धक्कालाई २०७२ कै निरन्तरता वा ‘परकम्पन’ किन भनिएको हो बुझ्नुपर्छ। एकचोटि ठूलो भुइँचालो आएपछि त्यसपछिका सबैलाई परकम्पन भन्ने हो त? होइन। त्यसो हो भने त १९९० सालपछिका सबै भुइँचालो परकम्पन हुने भए।
नेपाल भुइँचालोको जोखिममा छ भन्ने हामी सबैलाई ज्ञात भइसक्यो। हामीले थाहा पाउने गरी वा नपाउने गरी खुसुखुसु भुइँचालो आइरहेकै हुन्छ। कति धक्का केन्द्रको रेकर्डमा समेत रहँदैन।
२०७२ वैशाख १२ गते ७.६ म्याग्निच्युडको ठूलो धक्का आउनुअघि पनि यस क्षेत्रमा सामान्य झट्का आइरहन्थे। जबसम्म यी सानातिना झट्का २०७२ अघिको अवस्थामा फर्कंदैन, तबसम्म यसलाई परकम्पनकै रूपमा हेरिन्छ।
केन्द्र प्रमुख अधिकारीका अनुसार गोरखादेखि दोलखासम्म आइरहेका धक्का अहिले पनि सामान्यभन्दा चार गुणा बढी छ। यो वैशाख १२ को भुइँचालोले प्रभाव पारेको क्षेत्र हो।
उनको भनाइलाई केन्द्रको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। पुस २६ गते रामेछापमा ४.५ म्याग्निच्युड र त्यसअघि पुस ७ गते सिन्धुपाल्चोकमा ४.७ म्याग्निच्युडको भुइँचालो गएको केन्द्रको रेकर्डमा छ।
‘भुइँचालोको संख्या र शक्ति घट्दै गए पनि धक्का जारी छ। काठमाडौंबाहिर त हल्का हल्का धक्का आइरहेकै छन्, यहाँ हामीले चाल नपाएका मात्र हौं,’ अधिकारीले भने, ‘काठमाडौं नै हल्लाउने गरी परकम्पन आएपछि मात्र हामी चनाखो हुन्छौं।’
अहिलेको अवस्था हेर्दा परकम्पन आउने क्रम अझै १०–१५ वर्ष जारी रहने उनले बताए।
करिब १० हजार जनाको ज्यान लिएको गोरखा भुइँचालोको यतिका वर्षसम्म निरन्तर धक्का आउनुको कारण के?
गोरखा भुइँचालोलाई ‘अधकल्चो भुइँचालो’ भनिन्छ। भुइँचालोको शक्ति पूरै निख्रिएको थिएन। भूगर्भविद्का अनुसार ठूलो धक्का आउँदा चुरे फेदमा जमिन चिरा परेर शक्ति निष्कासन हुनुपर्छ। यसको तरंग भने काठमाडौं हुँदै दोलखासम्म पुग्यो, तर चुरे फेदको जमिन चिरा पार्न सकेन।
२०७२ को भुइँचालो त्यति शक्तिशाली हुँदाहुँदै अधकल्चो हुनुको कारण के त?
यो प्रश्नको जवाफ बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका भूगर्भ वैज्ञानिक जन इलियट र उनका सहकर्मीले दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल ‘नेचर जियोसाइन्स’ मा छापिएको उनीहरूको लेखले वैशाख १२ को भुइँचालो तरंग कहाँ पुगेर अड्कियो भनी व्याख्या गरेको छ।
तपाईंले कपडाको थान च्यातेको देख्नुभएकै होला। कपडा उधार्दा सुरुमा अलिकति च्यातिन्छ, बाटो बनेपछि धर्रर उध्रिँदै जान्छ। कपडा उध्रिने शक्तिलाई भुइँचालो तरंग मान्ने हो भने त्यो काठमाडौंमुनि आएर अड्कियो। यहाँबाट दक्षिण सर्न सकेन। दक्षिण सरेर चुरे फेदसम्मै पुगेको भए अझै भयावह भुइँचालो जान सक्थ्यो। बीचमै अड्कियो, ठूलो जनधन क्षति टर्यो। भविष्यलाई खतराको घन्टी बनेर भने झुन्डिएकै छ।
यसो भइदिए साना म्याग्निच्युडका भुइँचाला लामो समय गइरहनेछन्। शनिबारको धक्का त्यसैमध्ये एक हुनसक्छ। यही गतिमा शक्ति निख्रिन धेरै वर्ष लाग्न सक्छ, तर कम जोखिमपूर्ण हुन्छ।
यति ठूलो शक्ति एकैचोटि बाहिर आउनु जोखिमपूर्ण हुनेछ। बेलायती वैज्ञानिक जन इलियटले आफ्नो शोधमा यही अवस्था खुलाउँदै काठमाडौंमा ‘अर्को ठूलो भुइँचालो जोखिम’ देखाएका छन्।
उदाहरणका लागि, नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा पाँच सय वर्षदेखि ८ म्याग्निच्युडभन्दा ठूलो भुइँचालो गएको छैन। त्यहाँ रन्किएर बसेको पिलो निचोरिँदो त्योसँगै काठमाडौंमुनि जम्मा भएको शक्ति बाहिर आउनसक्छ।सेतोपाटी